किन सन्किइन् कट्रिना ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
किन सन्किइन् कट्रिना ?
मुम्बइ-बलिउड अभिनेत्री कट्रिना कैफ हिजोआज सनक्क सन्किन थालेकी छिन् । अभिनेता रणवीर कपुरसँगको 'ब्रेकअप'पछि उनले खास गरी सञ्चारकर्मीसमक्ष रिस पोख्ने गरेकी छिन् ।
ब्रेकअपलगत्तै यसबारे प्रश्न सोध्दा उनले उल्टै प्रश्न गरेकी थिइन्, 'कोसँग मेरो अफेयर चलेको थियो भन्ने तपाईंलाई के थाहा ? के मैले कहिल्यै रणवीरसँग अफेयर चलेको थियो भनेँ ? अफेयर चल्दै नचलेको व्यक्तिसँग ब्रेकअप किन गर्नुभयो भनी सोध्ने यो कस्तो चाला हो ?'
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७३ ०७:३५ मंगलबार
किन सन्किइन् कट्रिना